Macluumaad musiibooyinka dabiiciga ah / Minnesota.gov
Waaxda Minnesota ee Ganacsiga waxay caawisaa macaamiisha dhacdada masiibada dabiiciga ah.
Khabiiradayagu waay kaa caawin karaan fahanka xuquuqahaaga, la shaqee baadhaha caymiyahaaga si aad u dhammayso sheegasho, oo kaa cawisaa samayntan go’aanada laga warqabo ee caymiska ka dib daadka ama waxyeelada duufaanka gurigaga, baabuurtka, hantida.
Isla markiiba roobka duufaanka leh ka dib
Isla markiiba ka dib roobka duufaanka, waxaa jira talloobin aasaasi kaas oo kuu qaadi kara jidka kabbashada. Shayga koowaad ee aad samaynaysaa waa in la soo waco shirkad acaymiskaaga hantida khusaysa (mulkiilayaasha guryaha, kiraystayaasha, ama baabuurta).
Hubso in dhismaha uu badbaado yahay in lagalo oo laga xidhido korontada.
Ka hor inta aanad bilaabin nadiifinta, qaad sawiro ama fiidyow si aad u duubto ilaa xadka waxyeelada.
Iska ilaali tuurida shayna (marka laga reebo cuntooyinka xumaada) ilaa aad la kulanto baadhaha caymiska. Waxay go’aamin doonaan waxa la daadin karo.
Samee hagaajin ku meel gaadh ah oo aan qaali ahayn si looga hortago waxyeelada hantidaada. Tusaale ahan, loox ku xidh daaqada jabtay ama dabool maro ah saqafka liigaga. Haddii kale, waxyeelo dheeraad ah ma dabooli karto xeerkaagu. Hay lacag qabashada alaabta aad iibsato, markaa waa laguu celin karaa lacagta.
Soo gudbinta sheegashada
La xidhiidh caymiska shirkadaada isla markaaba si aad uga warbixiso khasaare oo u raacdo tilmamaha uu ku siiyay adiga shaqaalaha sheegashadu.
Diyaarso xeerkaaga caymiska iyo lambarka sheegashada.Tani waxay caawin doontaa nidaamka sheegashadu inuu degdeg ahaado.
Qor qoraalada. Hay diiwaanka cida aad la hadasho iyo goorta: ku dar wada sheekaysiga kooban oo waydii su’aalo haddii aanad fahmin tilmaamaha.
Samee liiska guriga. Haddii aanad hadda ka hor lahayn liiska guriga, samee liiska walxaha badan sida aad xusuusan karto.
Sug baadhaha caymiska shirkadu inuu yimaado.Ha wicin qofna si uu u hagaajiyo ama u beddelo khasaarahaaga la’anta, helitaanka tilmaamaha baadhaha caymiska shirkadaada. Baadhitaanka muuqda ee caymiyahaaga ee khasaaraha, waxay noqon kartaa lama huraan ka hor inta aan baadhitaanka la samayn. Ha tuurin hantida waxyeeladu gaadhay ilaa shirkadadaada baadhaha caymisku kuu sheego inay caadi tahay in sidaa sla sameeyo. Haddii gurigaaga waxyeelo gadhay, samee keliya hagaajin ku meel gaadh ah ilaa;baadhaha caymiska uu eego waxyeelada.
Baadhaha caymiska shirkadu waxa uu baadhi doonaa gurigaaga si uu u qiimeeyo waxyeelada hore. Hubso inaad waydiiso baadhaha caymiska
Aqoonsiga saxda ah
Kaadhka ganacsigu waxa uu aqoonsan karaa lambarkooda telefoonka iyo cinwaanka
Macluumaadka ku saabsan waxa lagaaga baahanyahay inaad qabato marka xigta
Macluumaadka ku saabsan waxa shirkada ay qaban doonto marka xigta
Waydii haddii aad filayso inaad hesho qiyaasaha dib u samaynta ama haddii shirkadu ay taas qaban doonto iyaddoo ku metelaysa.
Qiyaasta wakhti inta ay qaadanayso baadhaha caymisku inuu filayo nidaamka dhammaynta sheegashada inuu gaadho
Kharashaadka nolosha ee dheeraadka ah Haddii aanad awood u lahayn inaad joogto gurigaaga, baadhaha caymiska waxa uu soo saari karaa lacag qadin ah wixii kharashka nolosha dheeraadka ah. Lacag caddan ah u beddelka jeega wax saamayn ah kuma yeelan doonto heshiiskaagii caymiska u dambeeyay. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad haysaa lacag qabashooyinka dhammaan kharashaaddka taageerada ee aad gashay sababtoo ah gurigaaga lama degi karo.
Hore U qorhseyso
La kullan wakiilkaaga caymiska si sanadle ah ama sida loo baahday si loo hubiyo daboolida caymiskaaga inuu ku fulanyahay inuu ka dhowro adiga iyo qoyskaaga khasaaraha. Xisaabta u darso isbeddelo kasta oo dhow ama ku diaritaanada hantidaada ama aaga kugu meersan.
Akhri oo faham xeerarkaaga caymiska
Dad badan waxay sugaan ilaa ka dib ay la kulmaan khasaare inay fahmaan daboolidooda. Nasiib darro, go’aamadan lagama noqon karo oo si toos ayay u saamayn doonaan kartidaada lagaga bogsato khasaare. Dib u eeg daboolidaada caymiska jirta oo garo meesha “gol daloolooyinkaagu” yihiin. Hubso inaad ogsoontahay xadadka xeerkaaga, jarjarida, iyo kareebidtaanka. Mulkiilayaasha guryaha badankoodu waxay leeyihiin xadadka dahabka la xidho, korontada, iyo waxyaabaha kale ee qiimaha leh.
Qiimaha lacagta caddanka ah ee kulidka ah daboolida qiimaha beddelka
Ka soo qaad in saqafkaaga uu ku waxyeeloobay roob duufaan leh oo dhammaan lakabayada maraarta leh waxay u baahanyihiin in la beddelo. Qiimaha lagu beddelayaa waa $10,000. Lakabyadu waa 10 sano jir, laakiin waxay ahayd inay gaadhaan 20 sanadood hoosta xaalada caadiga ah. Sidoo awgeed, waxay qiima dhaceen nus qiimahoodii buuxay.
Hoosta lacagta caddanka ah ee dhabta ah xeerka qiimaha, waxaad keliya oo bixin lahayd $5,000 oo khasaara ah, laga jaro jar jarid kasta. Hoosta xeerka beddelka kharashka, ugu horayn waxaad heli doontaa $5,000 waayida saqafka. Ka dib, marka la hagaajiyo ama la beddelo, waxaad u soo gudbin doontaa biilka shirkada caymiska wixii hadhaaga ah, ee aan ka badnayn qadarka ay go’aamisay shirkada caymisku si loogu celiyo saqafkaagii xaaladiisii asalka ahayd.
Qorshaha sheegashada mustaqbalka
Cidna weligeed ma taqaano hubaal ahaan marka masiibo dabiic ah ay dhacayso. Waxaa jira dhowr tallaabo oo aad qaadi karto si aad ku hubiso in si buuxda lagaaga magdhabi doono waayitaanka siiba samee sheegashada caymiska nidaamka so gudbinta oo ka fudud kana degdeg badan masiibada ka dib. Tusaale ahaan, deji nidaamka socda si aad u qorto macluumaadka alaabta qoyska ee muhiimka ah. Caddaymaha qoran waxaa ka mid ahaan kara: Warshadeeyaha, moodeelka, lambarka taxanaha ah, da’da, qiimaha markay cusubtahay. Caddaynta waxay caawin karta sheegashadaa mustaqbal kasta wixii ah alaab luntay iyo jarjarida cashuurta dakhliga. Hubso inaad ku haysto macluumaadkan meel amaan ah.
Marka aad dooranayso caymiska mulkiilyaasha guriga, macaamiisha badankoodu waxay ka fekeraan wax badan oo ku saabsan qiimaha guriga beddelka alaabta qiimaha leh ee ay gudaha ku haystaan. Marka la go’aaminayo baahiyaha daboolida, waa muhiim in la ogaado dhammaan “alaabta” taala gurigaaga oo damaanada qaada dhowrista gaarka ah. Walxaha caymiska la geliyo keliya kuma jiraan walxaha sida dahabka ama maarta la xidho iyo fanka, laakiin sidoo kale iibsiyada maada ah ee taageera dareenada gaarka ah. Hadii ay tahay qalabka cunto karinta qof cunto jecel, qofka nashaqadeeya shandadaha garabka ama qalab koronto oo qaali ah, waxaad ku maalgeliso dareenada gaarka waxay ku yeelan karaan saamayn muhiim ah baahiyahaaga caymiska.
Mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee lagu hubsado alaabtaada in si buuxda loo ilaaiyo waa in aad ku qorto liiska alaabta guriga. Halkan waxa ah sida loo sameeyo:
U ururi alaabtaada qaybo macquul ah, waxa loola jeedaa, hiwaayad ahaan, qol ahaan gudaha gurigaaga, iwm.
Waa inaad ku dartaa iibsiyada dabaal dega sida qalabka dhegaha iyo siliska iyo fanka, siibaa walxhaha firaaqada maalinlaha ah sida telefeeshinka iyo kabbanka.
Ha iloobin walxaha aad dhif ahaan isticmaasho sida qalabka qurxinta guri ee fasaxa, qalabka ciyaaraha, agabka, iwm.
Soo jiid dhammaan nuqulada warqadda lacag qabashada iibka asalka ah iyo/ama warqaddaha qiimaynta. Sidoo kale qor moodeelka iyo lambarka taxanaha ah.
Si feejigan u sawir ama fiidyow uga duub walax kasta iyo warqadda sharaxa kooban, ay ka mid tahay da’da, qiimaha iibka iyo qiimaha hadda lagu qiyaaso.
kaydi liiskaaga guriga iyo warqaddaha la xidhiidha meel amni ah, oo si fudud loo heli karo onlayn ahaan, kombuyuutarkaaga ama sanduuqa aanu dabku karin ama sanduuqa wax lagu kaydiyo ee baanka.
Ka feker la wadaagista nuqulka saaxiibada, qaraabada iyo adeeg bixiyahaaga caymiska.
Waxaad soo dejisan kartaa xidhmada liiska guriga(.pdf),ama abka liiska guriga bilaasha ah ee iPhone ama Android telefoonada casriga ah. Abku waxa uu kugu hagayaa adiga dhexda qabashada sawirada, sharaxaadaha, tirooyinka akhriyo iyo lambarada taxanaha ah, oo ka dibna ku kaydiya iyaga elektaroon ahaan wixii ilaalinta ah. Abkan waxa uu xataa abuuraa fayla hadduu lumo hore loogu kaydiyay oo wadaagis iimayl leh.
Ilaha kale ee dowladda:
Wakaaladu Maamulka Gurmadka Federaalka (FEMA) Caawimada Masiibada
The Minnesota Barnaamijka Caawimada Tamarta Minnesota oo ay Maamusha Waaxda ganacsiga Minnesota waxay bixin kartaa caawimada biilashka adeega tamarta iyo nalka ama beddel qalabka lagu kulayliyo guriga ama samaynta (800-657-3710, MN keliya). U qalmida Barnaamijka Caawimada Tamarkta Minnesota waxay ku salaysantahay dakhliga. Tusaale ahaan 160 qoys oo afar ay leeyihiin dakhli sanadla ah $46,056 ama ka yar waay u qalmi karaan.
Maareeyayaasha Gurmadka ee Degmadda : liiska degmooyinka xaga https://dps.mn.gov/divisions/hsem/contact/Pages/county-emergency-managers.aspx
Maamulka Ganacsiga yar ee Maraykanka : amaahda dulsaarka hoosaysa ee mulkiilayaasha guryaha, kiraystayaasha, ganacsiyada & ururada masiibo lagu dhawaaqay.
Xafiiska degmadda Minnesota (Minnesota District Office): Minnesota District Office
Intaa waxa dheer, waxaad ka eegi kartaa goobahan bulshadda ku salaysan wixii macluumaad ah.
Jaamacadda Minnesota Lambarka Laynka Jawaabta : wixii macluumaad ah ee badbaadada cuntadda ah, nadiifinta caaryada, iyo tilmaanta go’aanada maaliyadeed ee masiibada ka dib.
Shabakada Caawimada Beeralayda Minnesota (Minnesota Farmer Assistance Network) : MFAN waxay siisaa tilmaan ganacsiyo iyo dhaqaale oo aan kharash ku joogin beeralayda Minnesota iyo qoysaska beeraha ee dhibaatadu haysato.
Barnaamija Qaranka ee Caymiska Daadka (National Flood Insurance Program)
Khadka Caawimada Dhibaatada Masiibada : Isticmaalka maandooriyaha iyo Maamulka Adeegyada Caafimaadka: waxa uu bixiyaa macluumaad, taageero iyo la talin - 800-985-5990 ama fariin qoraal ah oo moobil ugu dir 66746.
Ready.gov : Tilmaamaha U diyaar gawoga Gurmadka ee ka timid Waaxda Amniga Wadanka ee Maraykanka.
Kaalmada Sharci ee Masiibada Qaranka (National Disaster Legal Aid) : ee loogu talo galay dada dakhliga hoose/dhexdhexaadka ah leh http://www.disasterlegalaid.org/
Jawaabta Masiibada Adeega Bulshadda ee Lutherenka (Lutheran Social Services Disaster Response) :
LSS adeegyada waxaa ka mid ah maaraynta xaalada masiibada xiliga dheer, isku xidhka mutadawica, caawimada dib u dhiska, taageerada caafimaadka maskaxda, la talinta dhaqaalaha.